चिनियाँ मालवाहक रेल र नेपाली व्यापारी
गत वर्ष दसैँ—तिहारदेखि जाडो यामभरि नेपालका मुख्य बजारमा चिनियाँ सामानको अभाव रह्यो। भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण चिनियाँ सामान पनि बजारमा नपाउँदा उपभोक्ताहरू छक्क पर्थे। नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकमध्ये एउटाले नाकाबन्दी लगाउँदा अर्को मुलुकको सामान बजारमा नपाउनुको कारण सर्वसाधारण उपभोक्ताले थाहा नपाउनु सामान्य थियो। अधिकांश नेपाली व्यापारीले चीनबाट नेपाल सामान लाँदा समुद्री मार्ग भएर भारतको कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
चीनमा मासु नखाने मान्छे हुँदैनन्। अझ उनीहरु मासु बिना खानै सक्दैनन्। बेइजिङमा अत्यनत् सीमित साकाहारी रेष्टुरेन्ट त छन् तर ती चिताइ नसक्नु महङ्गा। चिनियाँ नयाँ वर्ष वसन्त चाडको एक साताको अवधिमा चिनियाँहरुले कुनै पनि हतियार चलाउँदैनन्। हतियार नचलाएर के भयो त मासु खान उनीहरुलाई कसैले रोक्दैन। किनभने एक साताका लागि मासु पहिले नै साना साना टुक्रा पारेर फ्रिजमा राख्छन्।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको छैटौँ पूर्ण बैठक अक्टोबर 24 देखि 27 सम्म बेइजिङमा सम्पन्न भएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पूर्ण बैठकलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पहिलोले पार्टीको सचिवालय चयन, दोस्रोले चीन सरकारको नेतृत्व चयन र तेस्रोले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ। बाँकी पूर्ण बैठकहरू पहिला तीनवटा जति महत्त्वपूर्ण मानिँदैनन्। तर गत महिना सम्पन्न छैटौँ पूर्ण बैठकलाई चिनियाँ सञ्चार माध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भनेर समीक्षा गरेका छन्।
श्वेत चैत्यको शान
चीनको राजधानी बेइजिङको केन्द्रभागमा एउटा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा छ जहाँ नेपाली बाहेक सबैले बीस चिनियाँ युआन युआन अर्थात् तीन सय रुपैयाँभन्दा बढीको टिकट काटेर प्रवेश गर्नुपर्छ तर नेपालीलाई निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था छ।
प्रेम दिवसमाथि चिनियाँको चुनौति
प्रेम दिवसको विरुद्धमा प्रेमीप्रेमिका नहुने चिनियाँ युवाले सुरु गरेको एकल दिवस अर्थात् 'सिङ्गल डे' नै आज आएर संसारको बसैभन्दा धेरै व्यापार हुने लोकप्रिय दिनका रुपमा गणना हुन थालेको छ। हरेक वर्षको नोभेम्बर 11 तारिखलाई चीनमा एकल दिवसका रुपमा मनाइन्छ।
संशयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङलाई नेपाल भ्रमण गराउने लक्ष्य राखेका थिए। माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरुले नै चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले दालाहको कार्यकालको सफलताको मापन हुने दावी गरेका थिए।
नयाँ प्रधानमन्त्रीसामु नेपाल चीन सम्बन्धका चुनौति
नेपालको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले सधैँ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै आएको छ। नेपालका राजनीतिक परिवर्तन र सरकार परिवर्तनमा तटस्थ रहँदै चीनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ। केपी ओलीले राजीनामा दिँदा पनि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयले नेपाल चीन सम्बन्ध उत्तिकै सुमधुर रहने स्पष्ट पारिसकेको छ।
चीन दक्षिण एसिया एक्स्पो र नेपाल
एक्स्पोको अवधिमा 14 करोड चिनियाँ युआन बराबरको विभिन्न 40 वटा आर्थिक तथा व्यापारिक, विज्ञान तथा प्रविधि र शिक्षा क्षेत्रमा आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ। एक्स्पो सकिएपछि आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न4सय 95 वटा परियोजनामा लगानी गर्न हस्ताक्षर भएको छ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि चिनियाँ चासो
गत बैशाख तेस्रो साता नेपाल���ा एक्कासी सरकार परिवर्तनको आँधी आयो। क्षणिक रुपमा आएको आँधीको प्रभाव 24 घन्टामै सून्य भए पनि नेपालको सरकार अस्थिर छ भन्ने कुरालार्इ अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा राम्रैसँग प्रभाह गर्न सफल भयो। नयाँ संविधान बनेपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होला र आर्थिक विकासले गति पक्रेला भन्ने आशामाथि तुसारापात गरायो।
चिनियाँ पर्यटक बढाउने उपाय
नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा नाटाको संयोजनमा गत चैत्र 29 देखि बैशाख6सम्म चीनका मुख्य चारवटा सहरमा नेपाली पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बेइजिङ, ह्वाङचाउ, सांघाई र छन्दूमा भएको नेपाली पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमले नेपालमा उल्लेख्य रुपमा चिनियाँ पर्यटक बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल : चीन र दक्षिण एसियाको पुल
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा राजनीतिक मुद्दाको सट्टा आर्थिक मुद्दा प्रधान हुनथालेका छन्। अब नेपालले चीनसामु एक चीनको नीतिको प्रशंसा गरेर मात्र पुग्दैन। दुई देश बीचमा के कति आर्थिक लाभका कार्यक्रममा हातेमालो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याउन आवश्यक छ।
'नेपालमार्फत चीनले दक्षिण एसियामा उपस्थिति देखाउनेछ'
चिनियाँ राज्यपरिषद्को अधीनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) चिनियाँ थिंक ट्याङ्कहरुको संस्था हो। यसले चीन सरकारलाई विदेश मामिलासम्बन्धी सल्लाह र सुझाव दिने गर्छ। प्रा. हु सिसेङ 'सीआईसीआईआर'को एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक हुन्।
चीन भ्रमणका उपलब्धिहरु
प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरेका छन्। भारत भ्रमण गरेको एक महिनामै चीन भ्रमण भएकाले छोटो समयको तयारीबाट पनि भ्रमण उल्लेख्य र उपलब्धिमूलक सावित भएको छ। समग्रमा केलाउँदा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले नेपाललाई दूरगामी प्रभाव छाड्ने र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने ढोका खुलेको छ।
चीनसँग राख्नुपर्ने एजेन्डाहरु
जटिल परिस्थितिमा भारत भ्रमण गरेर चीन भ्रमण गर्न लागेका प्रधानमन्त्री निकै उत्साही देखिन्छन्। भारत भ्रमणभन्दा पहिले विज्ञ टोली गठन भएको र सरोकारवालाहरुसँग बैठक तथा छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण अगाडि पनि छलफल र बैठक गरी सुझाव मागेका छन्। ती सुझाव अनुसार के कति उपलब्धि हाँसिल हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।
संसारकै सबैभन्दा ठूलो संसदको रुपमा रहेको चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श दात्री सम्मेलनको अधिवेशनलाई चीनमा मात्र होइन विश्वमै महत्व दिइन्छ। चीनका सर्वोच्च विधायिकाको नियमित वार्षिक अधिवेशन भएकाले चीनमा महत्व हुने नै भयो। ती अधिवेशनले पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले अन्य मुलुकलाई पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर पार्ने गर्छ।
कस्तो हुनुपर्छ चीनका लागि राजदूत?
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध युगौँ पुरानो हो। औपचारिक रुपमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पनि 60 वर्ष पूरा भइसकेको छ। गत वर्ष गएको भूकम्प र त्यसपछिको दक्षिणी नाका अवरुद्ध भएपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध धेरै फराकिलो दायरामा प्रवेश गरेको छ। विगतलाई केलाउने हो भने नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर र नियमित रहेको छ।
चीनमा बाँदर वर्ष
चिनियाँ चन्द्रमासको पात्रो अनुसार यही फेब्रुअरी 8 तारिख अर्थात् माघ 25 गते सोमबार भेडा वर्षलाई बिदा गरेर बाँदर वर्ष भित्र्याउँदैछन्। चिनियाँ नयाँ वर्षलाई वसन्त चाड भनिन्छ भने चिनायाँ भाषामा छुन्चे भनिन्छ। चिनियाँ नयाँ वर्ष अर्थात् वसन्त चाडका केही रोचक पक्षहरु यस प्रकार रहेका छन्।
एआइआइबी र नेपाल
सन् 2016 को जनवरी 16 तारिख बेइजिङमा भव्य समारोहको आयोजना गरी आइआइबी संचालनमा आएको छ। एआइआइबीले क्षेत्रीय संस्थापक दसस्यहरुबाटसात सदस्य र गैर क्षेत्रीय सदस्यहरुबाट दुई गरी नौ सदस्यीय संचालक समिति बनाएको हो। क्षेत्रीय सदस्यहरुमध्येबाट नेपालसँगै चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अष्ट्रेलिया, रुस, भारत, कोरिया र टर्की संचालक सदस्यमा चयन भएका छन् भने गैर क्षेत्रीय सदस्यहरुबाट जर्मनी र बेलायत संचालक सदस्य बनेका छन्।
यसपटकको भ्रमणमा नेपालले चीनसमक्ष विभिन्न एजेन्डाहरु प्रस्तुत गरेको थियो। तर नेपालले प्रस्तुत गरेका कुनै पनि एजेन्डामा चीनले गम्भीर चासो देखाएन अर्थात् तत्काल सम्झौता गर्न चीनले आवश्यक ठानेन। यसको मुख्य कारण चीनलाई नेपालले विश्वासमा लिन नसक्नु हो। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ चीन नेपालप्रति विश्वस्त हुन सकेको छैन।
चीनबाट पेट्रोल आयातको संभावना र चुनौति
अनुदानमा गएको चिनियाँ पेट्रोल भारतबाट आएको पेट्रोलभन्दा राम्रो भएको उपभोक्ताले प्रतिक्रिया दिएका छन्। चिनियाँ पेट्रोलले माइलेज राम्रो दिएको, इन्जिनको आवाज राम्रो भएको, सवारी साधन स्मुथ्ली चलेको, सजिलैसँग स्टार्ट भएको जस्ता प्रतिकृयाले भारतीयभन्दा चिनियाँ पेट्रोल राम्रो भएको प्रमाणित भइसकेको छ।
मुनामदनका चिनियाँ अनुवादक
सामाजिक विज्ञानको चिनियाँ प्रतिष्ठान अन्तर्गत राष्ट्रिय संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिका प्राध्यापक लिउ चिआनले मुनामदनलाई चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेका हुन्।उनले अनुवाद गरेको मुनामदन खण्डकाव्य सन् 2011 को डिसेम्बरमा चिनियाँ भाषामा प्रकाशन भयो। अंग्रेजीबाट चिनियाँ भाषामा अनुदित भएपछि धेरै चिनियाँले लोकप्रिय झ्याउरे लयको मुनामदन पढ्न पाएका छन्।
बदलिँदो चीन अमेरिका सम्बन्ध
विविध विषयमा विवाद भएपनि चीन र अमेरिकाले गहन विषयमा सहकार्य गर्दै आएका छन्। यसका लागि पछिल्लो विषय विश्वव्यापी समस्याका रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनमा यी दुई ठूला मुलुकबीचमा सहकार्य सुरु भएको छ।
चीनको शक्ति प्रदर्शन
चीनले राजधानी बेइजिङको केन्द्रमा रहेको थिआन मन स्क्वायरमा यही भदौ 17 गते (सेप्टेम्बर3तारिख) विशाल सैनिक परेड गर्दैछ। चिनियाँ जनताले जापानी अतिक्रमणकारी युद्ध अर्थात् फासिस्ट विरुद्ध युद्ध विजयी गरेको तथा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको 70 औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा चीनले सैनिक परेड गर्नलागेको हो।
तारे होटल त सबैले सुनेकै कुरा हो। एक तारेदेखि पाँचतारेसम्मका होटल हाम्रै नेपालमा थुप्रै छन्। नेपालको छिमेकी मुलुक चीनको राजधानी बेइजिङमा तारे होटलकै हाराहारीमा तारे सार्वजनिक शौचालय छन्।